पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाउने ट्याङ्कर चालक पक्राउ:: Naya Nepal
प्रहरीले पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाएर ठगी गर्ने ट्याङ्कर चालकलाई पक्राउ गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले भारतको बरौनीबाट २० हजार लिटर पेट्रोल लिएर काठमाडौँ आएको ना४ख ३०८५ नंको ट्याङ्करमा तारपिन तेल मिसाउने चालक सचिन सुवेदीलाई मङ्गलबार साँझ आयल निगमको थानकोट डिपोबाट पक्राउ गरेको हो ।
वृत्तका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले नक्कली ट्याङ्कीको चाबी प्रयोग गरी चेम्बरको लक खोलेर तारपिन तेल मिसाएको सूचनाका आधारमा सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल आयल निगम थानकोट शाखाका प्रमुख प्रदीप यादवले पेट्रोलमा ६०० लिटरभन्दा बढी तारपिन तेल मिसाएर ल्याएकाले कारवाही गरिएको बताए ।
दुई साताको अवधिमा आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलमा मिसावट गर्ने तथा चोरी गर्ने छ चालकलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिसकेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा डा. पौडेल नियुक्त
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा सहप्राध्यापक डा. नारायणप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन् । मप विश्वविद्यालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रजिष्ट्रार छनोट गरी नियुक्ति दिन गत असार २२ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
उन्नाइस जनाबीचको प्रतिस्पर्धामा समितिले छनोट गरेका सह प्रा.डा. पौडेललाई रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि मप विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिएको र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति स्वीकृत गर्नुभएको उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले जानकारी दिए । “यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्ने काम नेपालका विश्वविद्यालयहरुको इतिहासमा पहिलो घटना हो,’ उनले भने, ‘जुन काम यतिबेला मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सम्पन्न गरेको छ ।’
अमेरिकामा आधुनिक प्रविधिलाई अनुमति नदिने अमिशहरू
अमेरिकामा अहिले पनि टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोनमा पहुँच प्रतिबन्ध गरेर अमिशहरू आधुनिक संसारलाई उनीहरूको जीवनमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्षम बनेका छन् । अनौठो लाग्न सक्छ ! तर यो सत्य हो । पेन्सिलभेनिया राज्यको लेनक्यास्टर काउन्टीका अमिशहरूले अझ पनि शताब्दी पुरानो ‘सादा’ जीवनशैली बिताउँदैछन् ।
अमिशहरूको विश्वास अनुसार उनीहरू संसारको अनुरूप हुनु हुँदैन । यस कारणले उनीहरू केही आधुनिक सुविधाहरूबाट टाढा हुन्छन्, जसले अमिशहरूलाई उनीहरूको विश्वासको अनुशरण गर्न अनुमति दिँदैन ।अमिशले बिजुली प्रयोग गर्दैनन्, त्यसैले त्यहाँ कुनै टेलिभिजन, कम्प्युटर वा रेडियो छैन । यातायातको लागि मोटर गाडीको ठाउँमा उनीहरू घोडा र बग्गी प्रयोग गर्छन् । कृषिका साथै व्यवसाय र कुटिर उद्योगमा संलग्न उनीहरूलाई हेर्दा अमिशको जीवनशैली ३०० वर्षभन्दा अघिदेखि अपरिवर्तित रहेको देख्छौँ।अमिशहरूको जीवनशैलीबारे अधिक जान्न र यस अनौठो संस्कृतिको अनुभव लिन लाखौँ आगन्तुकहरू अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अमिश समुदायको घर लेनक्यास्टर काउन्टीमा आउँदछन् ।
(अमिश गाउँ घुमाउने बसहरू)
युयु र म पनि पुग्यौँ लेनक्यास्टर काउन्टीको अमिश गाउँ । पुर्याए– न्यूयोर्कका कृष्ण भट्टराईले । सफ्टवेयर इन्जिनियर साथै एक सफल व्यवसायी हुन् कृष्ण भट्टराई ।
अमिशको घर दैलो डुलाउने डा. एरिना थिइन् । यिनले अमिशहरूको घरभित्रका सर- सामानहरू, पकाइ खाने भाँडा बर्तनहरूदेखि अमिशहरूको पोशाकहरूको परिचयसाथै उनीहरूको जीवनशैली वृत्तान्त सुनाएर मक्ख पारिन् हामीलाई ।
(अमिशले घरमा प्रयोग गर्ने सामान)
सन् १६९३ मा जाकोब अम्मानको अगुवाइमा स्विटजरल्याण्ड र अल्साटियन मेनोनाइट्स एनाब्याप्टिष्टहरूको एउटा समूहभित्र फरक चर्चको इतिहास सुरू भयो । त्यसपछि अम्मानलाई पछ्याउनेहरू अमिशको रूपमा चिनिए । अमिशहरू १८ औँ शताब्दीको सुरूतिर उत्तर अमेरिका आएका हुन् युरोपबाट । हाल अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यमा मात्र ७९,२०० भन्दा बढी अमिशहरू बसोबास गर्छन् ।
धर्मः एनाब्याप्टिष्ट मान्ने अनि शास्त्र: बाइबल पढ्ने अमिशहरू घरमा एकअर्कासँग कुराकानी गर्दा ओल्ड अर्डर पेन्सिलभेनिया डच बोल्छन्, जुन जर्मनको बोली भाषा हो । यो उत्तरी जर्मनीको केही भागमा बोलिने ‘प्लाट’-सँग मिल्दोजुल्दो छ ।
अमिशहरू विश्वास गर्छन् ठूलो परिवारहरू परमेश्वरबाट आशिष हुन् । उनीहरू धेरै बच्चाहरू जन्माउने आशा गर्छन् र एउटा परिवारमा सातदेखि दश जना बच्चाहरू हुन्छन् । जब बच्चाहरू स्कुल जान थाल्छन् उनीहरूले अङ्ग्रेजी सिक्छन् ।
अमिश स्कुल एक कोठाको घर हुन्छ । जहाँ कक्षा एकदेखि आठ सम्मको पाठ पढाइन्छ । स्कुलमा अविवाहित महिला शिक्षिका हुन्छिन् । उनीहरूको विश्वास अनुसार आठौँ कक्षा भन्दा परको शिक्षा अमिश जीवनशैलीको लागि अनावश्यक छ ।
उमेरको हिसाबले १४ वर्ष पुगेपछि औपचारिक शिक्षा बन्द गरिन्छ । उनीहरू १६ वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म आफ्ना अभिभावक,समुदाय र स्कुल शिक्षकद्वारा व्यावसाय प्रशिक्षण प्राप्त गर्छन् ।
१६ वर्षका अमिश युवा युवतीहरूलाई परिवारको फोल्डबाट छाडिन्छन् र उनीहरूले पत्ता लगाउनु पर्छ कि अमिश हुनु भनेको के हो ? यो एक अवधि उनीहरूले वयस्कको रूपमा बप्तिस्मा लिनु अघि देखा पर्दछ र उनीहरू अभिभावकको नियन्त्रणमा हुँदैनन् ।
अमिश चर्चको सदस्यता बप्तिस्माको साथ सुरू हुन्छ। १६ वर्षदेखि २३ वर्ष बीचको उमेरमा एकपटक कुनै व्यक्तिले चर्चमा बप्तिस्मा लिए ऊ विवाह योग्य ठानिन्छ । अमिश नियमहरूले अमिश चर्चका सदस्यहरूबीच मात्र विवाह गर्ने अनुमति दिन्छ ।
( अमिश घरहरू)
अमिश युवा युवतीहरू आफ्नो जीवन साथीको खोजी सुरू गर्छन् । कुनै जोडी विवाहको लागि तयार हुन्छ । यो कुरा जुलाई वा अगस्त महिनासम्म गोप्य राखिन्छ । युवकले युवतीलाई एक उपहार दिन्छ र युवतीले आफ्नो परिवारलाई जानकारी दिन्छिन् ।
(अमिशले प्रयोग गर्ने भाँडाहरू)
त्यसको ठीक दुई हप्तापछि आइतबार सेवाको अन्तमा विवाह गर्न चाहने जोडीको अनुपस्थितिमा मण्डलीका डिकनले विवाह गर्न मनसाय राख्ने युवतीको नाम घोषणा गर्दछन् र उनी कोसँग विवाह गर्न चाहन्छिन्,सो बताउँछन् । त्यसपछि युवतीको बाबुले विवाहको मिति र समयको घोषणा गर्दछन् । युवतीको परिवार चर्चबाट फर्किएपछि छोरीले औपचारिक रूपमा आमा-बाबुसँग उनका भावी पतिको परिचय गराउँछिन्।
(अमिशले प्रयोग गर्ने काठका सामानहरू)
नोभेम्बर अनुकूल महिना मानिन्छ र मंगलबार अथवा विहीबारको दिन विवाह सम्पन्न गरिन्छ । विवाहमा दुलहीले मन पराउने पोशाकको रंग नीलो हो । नव विवाहित जोडीले पहिलो रात दुलहीका अभिभावकको घरमा बिताउँछन् । धेरैजसो मण्डलीमा विवाहपछि पुरूषलाई दाह्री काट्न निषेध गरिएको छ ।
(अमिश गाउँमा पसल)
अमिशको चर्चमा २० देखि ४० सम्मका परिवार हुन्छन् । ओल्ड अर्डर अमिशहरूले चर्च घरहरू निर्माण गर्दैनन् । तर हरेक आइतबार एक सदस्यको घरमा पूजा, सेवाहरूको लागि भेला हुन्छन् । यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई ‘हाउस अमिश’ पनि भनिन्छ ।
(अमिश महिलाको पहिरन)
अमिशलाई ‘सादा मानिस’ भनेर चिनिन्छ । उनीहरूको पहिरन कालो, नीलो, खैरो, बैजनी वा हरियो रंगको सादा हुन्छ । अमिश पुरूषहरूले सामान्य पेन्टको साथ कालो सुट, कालो जुत्ता लगाउँछन् । काम गर्दा लगाउने जुत्ता खैरो हुन्छ । ट्राउजरमा कुनै जिपर हुँदैन र त्यसको सट्टा बटनहरू हुन्छन् ।
अमिश महिला र युवतीहरूले लामो बाहुलाहरू र पूरा स्कर्टको साथ ठोस रंगको कपडाबाट बनाइएको परम्परागत पोशाक लगाउँछन् । यी पोशाकहरू केप र एप्रनले ढाकिएको हुन्छन् । आफ्नो कपाल कहिल्यै काट्दैनन् । टाउको पछाडि सानो टोपीले ढाक्छन् । अमिश महिलाहरूलाई कुनै प्रकारको गहना लगाउन अनुमति छैन ।
अमिश समुदायमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भए, मृतकको पार्थिव शरीरलाई तीन दिनपछि दफनाइन्छ ।
(अमिश गाउँमा बसहरू)
अबको पालो मार्ग्रेट स्मिथको छ- हामीलाई अमिश गाउँ घुमाउने। उनी बसमा पर्खेर बसेकी थिइन्। बाहिर सेताम्मे हिउँ, हावा चिसो छ । केही दिनअघि परेको हिउँ पग्लिसकेको थिएन । अङ्गुर र स्याउका बोटहरूमा जमेको हिउँ सूर्यको किरणले पग्लिएर तप्कँदै थियो । सडकका दुवैतर्फ अमिशका घरहरू भेटिन्थे । म बसको झ्यालबाट बाहिरको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्छु ।
(पुरानो फार्म जाने बाटो)
अमिश गाउँ भ्रमण गर्दा उनीहरूको फोटो वा भिडियो लिनबाट जोगिनु पर्छ । अमिशहरूको उपस्थितिमा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु उनीहरूको धर्मको विरुद्ध मानिन्छ, र उनीहरूले फोटो खिच्ने अनुमति दिँदैनन् ।
अमिशहरूले लामो समयदेखि जीवनशैलीको रूपमा खेतीपातीलाई रूचाएका छन् । लेनक्यास्टर काउन्टीमा उनीहरूले उब्जाएका फसलहरू क्षेत्रफलअनुसार मकै, गहुँ, जौ, आलु, सुर्तीजन्य बाली, सोयाबीन र अन्य तरकारीहरू मुख्य बाली हुन् । मकै, गहुँ प्रायः गाईवस्तुलाई खुवाउनका लागि खेती गरिन्छ ।
(अमिश गाउँका गाईहरू)
हामी चढेको बस अमिश फार्म हाउस, अमिश पसल, अमिश खलियान, अमिश फार्म पशुहरू, एक कोठाको स्कुल, अमिशको चिहानघारी भएर सडकमा गुड्दै थियो ।
(अमिश मेनोनाइट्सको घर आँगनमा गाडीहरू)
कतिपय घरका आँगनमा गाडी देखिन्थे, मार्गेट स्मिथ लाई सोध्छु – ‘यी घरहरू कस्का हुन् ?’
‘अमिशहरूले त गाडी चलाउँदैनन् भनेको होइन र ?’ मैले सोधेँ ।
‘ओल्ड अर्डर र न्यू अर्डर समूहका अमिशहरूले गाडी चलाउँदैनन् । तिनीहरूले घोडा तान्ने बग्गीहरू प्रयोग गर्छन् । तर बिच अमिश र अमिश मेनोनाइट्स समूहका अमिशहरूले गाडी चलाउँछन् ।’ मार्ग्रेट स्मिथले भनिन् ।
(अमिश गाउँमा हिउँको पुतला)
अमिशहरू सैद्धान्तिक विवादका कारण पटक-पटक विभाजित भएका छन् ।उनीहरू मुख्य रूपले (१) ओल्ड अर्डर अमिश (२) न्यू अर्डर अमिश (३) बिच अमिश र (४) अमिश मेनोनाइट्स गरी चार समूहमा विभाजित छन् । समूहभित्र पनि विभिन्न उपसमूहहरू छन् र नियमहरू समेत फरक-फरक छन् ।
तर पनि आधुनिक अमेरिकी समाजभन्दा धेरै फरक छ अमिशहरूको परम्परागत जीवनशैली – जुन अकल्पनीय छ ।